Ukushisa komhlaba kuzodala ezinye izivunguvungu e-United States | Isimo Sezulu Senethiwekhi
Njengoba iplanethi ifudumala, ibhalansi yasemkhathini iyalahleka. Manje, ucwaningo olushicilelwe ephephabhukwini lesayensi i-Nature Climate Change lukuveza lokho Iziphepho ezengeziwe zizoshaya i-United States ngasekupheleni kwekhulu leminyaka, okuzodala izikhukhula eziningi futhi ezimbi kakhulu ezizobeka izimpilo zezigidi zabantu engcupheni.
Futhi konke kungenxa yokungcola, ukuqothulwa kwamahlathi, ... ekugcineni, umthelela womuntu emvelweni.
Emadolobheni afana neLouisiana, iHouston neWest Virginia, izimvula ezinkulu kakhulu ziyobe ziphindwe kathathu kakhulu ngasekupheleni kwekhulu leminyaka, futhi ziphindwe kaningi ezifundeni zaseMississippi Delta. ngoba umoya njengoba ufudumala ugcina umswakama omningi, ukuze imvamisa yemvula eyedlulele kulezi zifunda izokhuphuka. Ososayensi baveza ukuthi lokhu kwanda sekuqalile, kepha ucwaningo olusha lukhombisa ukuba bucayi kwesimo, njengoba senziwe ngokufaniswa okunamandla kakhulu kwekhompyutha.
Ngenxa yokulingisa okuphezulu kwekhompyutha, okucishe kube cishe izikhathi ezingama-25 kunamanye amamodeli ekhompyutha, Ochwepheshe bakwazile ukwazi ukuthi kuzoba nokwanda okungenani kwezikhathi ezinhlanu emvula eGulf Coast, ogwini lwe-Atlantic naseningizimu-ntshonalanga ye-United States.
U-Andreas Prein, umbhali oholayo walolu cwaningo nososayensi e-National Center for Atmospheric Research, ukuvezile lokho i-US izokala ukwanda ngo-180% kwezimvula ezinkulu ngaphambi kokuphela kwekhulu leminyaka, izifunda ezingathintekile kangako okuyisikhungo esisenyakatho-nenyakatho kanye nezingxenye zogu olusentshonalanga.
Ukuduma kwezulu nemvula enamandla kakhulu kungenzeka kakhulu esimweni sezulu esizayo, okusho ukuthi ngokuzayo kungaba namandla amakhulu kakhulu okukhukhula. Lokhu kungaba nomthelela omkhulu.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Isimo Sezulu Senethiwekhi » Izibikezelo » Ukushisa komhlaba kuzodala ezinye izivunguvungu e-United States